व्यवसायीले बजार अनुगमन नपर्ख – दाङ खबर
व्यवसायीले बजार अनुगमन नपर्ख
गोविन्द खड्का/धोरोरोरो आवाज निकाल्दै रक्सी नालामा घोप्ट्याउँदा भरतपुर क्षेत्रमा धेरैका कान ठाडा भएका थिए । आफ्नो पनि फाल्दीनछन् भन्ने त्रास धेरैमा थियो । अलि पर सम्मका पनि व्यवस्थापनमा लागेका देखिन्थे ।
अनुगमनमा जो आएपनि फरक पर्दैन भन्ने गरी ढुक्क रहेका व्यवसायी खासमा भेटिएनन् । आफुलाई प्रतिष्ठित व्यवसायी भन्नले पनि गल्ती गरेको भेटिएको छ । न्युन व्यवसायीले कानुन सम्वत व्यवसाय गरेका छन् । यसको मतलव तस्कर र भ्रष्टको देश बन्न सजिलो छ ।
अनुगमन टोलिले सानातिना खुद्रा पसल गर्नेहरुले पनि आफ्ना सामानमा उपभोग्यमिति ख्याल नगरेको भेटायो । उपभोग्यमिति नभएकै कारण कतिपय पसलको सबै विस्कुट उठाएको थियोे । लाईसेन्स नभएकै कारण पसलको सबै महंगो रक्सी अनुगमन टोलिले उठाएको थियो । पसलै रित्तिने गरी अनुगमन टोलीले लैजाने व्यवसाय किन गरीन्छ ? कमजोरी कस्को हो ?
उफर खुट्टि लाएर ठालुबनी सेखि झार्ने हाम्रो शान मानिन्छ । घुम्रीएर काम गर्न लागेकोलाई अपमान गरीन्छ । आरनमा काम गरीरहेको अनौँठो पेशा ठानिन्छ । बगरका गिटिकुटेकोलाई व्यापक प्रचार प्रसार गरीन्छ । उनिहरुको संघर्षमय जिवनको सम्मान होईन दया देखाएर हेलाँ गर्ने चलन छ । श्रमको सम्मान गर्न होईन कि काम गरीरहेका नागरीकलाई भड्काउने पेसै छुटाउने संस्कार छ ।
पसल अगाडि घाममा पिठ्यूसेकाएर दिन धकेलीरहेका धेरैछन् । उनिहरु आफ्नो पसल अगाडिको प्लाष्टिक टिप्दैनन् । नाला दुर्गन्धित भएको देख्दैनन् । पसल व्यवसायमा बसेर मोवाईल खेलाएर विताएका हुन्छन् । छिटुवामा तरकारी बेच्दैहिड्नेलाई निम्छरो व्यवहार देखाउँछन् । कोहि ग्राहक आएपछि बेच्ने हो । नत्र कुरेर विताउने हो । त्यो सुहाएको हुँदैन । कम्तीमा सामानको धुलो झार्ने, त्यसमा रहेको उपभोग्यमिति जाँच गर्ने, खराब भएको अलग गर्ने त सकिन्छ नि ?
पसलमा रहेका सामानको अबस्था हेर्न नभ्याउन व्यस्तता थोरैको छ । कुन सामान छ, त्यसको उपभोग्य म्याद कति हो ? भनेर खोजतलास गर्न सक्छन् । ठुला पसलहरुले पनि कर्मचारी परिचालन गर्न सक्छन् । उनिहरुले पसल तथा गोदामको सामान जाँच गरेर अलग्याउन सक्छन् । म्याद गएका सामान फिर्ता गर्ने र नमिल्नेलाई नष्ट गर्ने मनसाय मात्रै हुनुपर्छ ।
अधिकांश उपभोक्ताले उपभोग्य मिति हेर्दैनन् । बिग्रेका खानेकुरापनि किनेर लैजान्छन् । त्यहि स्तरका कतिपय पसलेहरु पनि छन् । कतिपय उद्योग नै खराब छन् तिनले उपभोग्यमिति हालेको पत्ता लगाउनै सकिन्न । कति धेरै निज्याउदा पनि उत्पादन र उपभोक्ता मिति भेटिन्न । तिनलाई सरकारले तह लगाउनुपर्ने हो । यहिँको उत्पादन पाउरोटि वेकरीको समेत म्याद थिएन । सबैले हालेपछि म पनि हाल्छु भन्ने व्यवसायीको भनाई थियो । पाउरोटि तथा व्यकरी समिति नै गठन गरेर अशोक श्रेष्ठ, शरद थापा र नरेश श्रेष्ठ लगाएतको सकृयतामा सम्भव भयो । दाङ जिल्ला उद्योगवाणिज्य संघका अध्यक्ष नारयण भुषालको चल्दापुर्जा नेतृत्वले कार्यन्वयनमा ल्यायो । यहि विषय जिल्लाका अरु बजारमा कार्यन्वयन भएको देखिन्न ।
अनुगमनको क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद आचार्यले ठुलै पसल बाट म्याद गएको सामान निकाल्नुभयो । ति व्यवसायीले होईन हजुर यो फिर्ता गर्ने हो भनेर हात जोड्नुभयो । आचार्यले अब फिर्ता हामिले गर्छौ तपाईले पर्दैन भन्दिनुभयो । अचार्यको भनाई थियो, म्याद गएको सामान अलग गरेर राख्नुपर्दथ्यो । भित्र गोदाममा संगै राख्नुभएको छ । सवै भन्दा पुरानो देखिन सामान तानेर म्याद हेर्ने आचार्यको बानि थियो । ति व्यवसायीले łमैले टाँडिमा राखेको छैन । भित्र भित्र गोदाममा त जेपनि राख्न पाईन्छ । यसमा अनुगमनमा सहभागि उपमेयर सिता न्यौपाने, दाङ जिल्ला उद्योगवाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष वसन्त जोशि लगानी गरेको पैसा फिर्ता आउँछ, कम्पनीले दिन्छ भने त के भो त, घाटानहुने काम गरौं भन्नेमा सहमत हुनुहुन्थ्यो । यसमा मेरो असमति छ भनेर आचार्यले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । साना पसलमा फाल्ने ठुलामा फिर्ता हुन्छ भनेर छोड्न सकिन्न भन्दै उठाउन आदेश दिनुभयो प्रहरीले लगि छोडे । अन्त बाट जफत गरेको हुनाले यसरी लैजानु न्यायीक थियो ।
धेरै पसल व्यवसायमा दर्ता प्रमाणपत्र नभेटिदा नयाँ समस्या खडा भएको छ । पसलमा बस्नेले न भेटाउने, राख्नेवाला सम्पर्कमा नहुने देखियो । उनिहरुले टंगाएर छोडेकोभए सजिलो हुने थियो । दर्ता भएपनि प्रमाण नभेटिदा केहिको मदिरा जन्य पदार्थ जफत भएको छ । प्रमाणपत्र ताल्चा लगाएर आफु काममा हिड्ने गरेको भेटियो । नविकरण नगरीएका व्यवसाय पनि भेटिएका छन् । उनिहरुले पनि आफ्नो कमजोरी हो भन्दै सुधार्नुपर्छ । तर, स्थाई भ एगर्ने चलिन भने किन दर्ता गर्ने ? भर्खर दुईचार महिना भयो । त्यसैले दर्ता गरेका छैनम् भन्थे ।
केहिले फुर्सद नपाएर पनि नविकरण नगरेको जानकारी दिए । उनिहरुले एउटा सरकारको तिन ठाँउमा कर तिर्नुपर्ने नियममा आपत्ति जनाएका छन् । स्थानिय सरकार बनिसकेपछि सबैले त्यहि दर्ता गर्ने र नविकरण गर्ने मिलाउनुपर्छ भन्ने माग छ । स्मार्ट सिटिको अबधारणा छ । बत्तीको विल ई सेवावाट तिर्नमिल्ने भएको छ । व्यवसायी भने कर तिर्न घुस बोकेर कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । समयमा काम हुँदैन । सबै ठाउँमा तिर्ने रकम एकमुष्ट दिने गरी व्यवस्थामिलाउन मागछ । यो जायज माग प्रति उद्योगवाणिज्य संघले पहल गर्न जरुरी छ ।
पसल भित्र पस्यो नै फोहरको रास थियो । खुसुकक प्रहरीहरु ग्राहक सुत्ने कोठामा पुगेछन् । उनिहरु जंगिदै आए । ए साहुजी त्यहाँ को बस्छ ? जवाफ आयो ग्राहक, अनि चुरोटका ठुटा मात्रै छन् । बढारेकोपनि छैन । सबैतिर धुरै धुलो छ । गन्ध आउँछ । हैट यस्तोमा को मान्छे बस्छ ? होटलवालाको जवाफ थियो रात विरात आएकालाई सुताउने हो । यस्ता कमजोरी अनुगमनले भेटायो ।
यतिबेला अनुगमन अलि सकृय भएको छ । कहिल्यै औषधि, कहिले चाउमिन, फलफुल, खाद्य, होटल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय हरेकको पालो पालो अनुगमन गरीएको छ । दिन दिनै अनुगमन चाडपर्वको बेलामा दखिएको छ । अरु बेलामा छड्के अनुगमन हुनेगरेको छ । यसको अर्थ अनुगमनलाई सघन बनाईदैछ । सरकारको नितिनियम बाहीर रहेर कसैले पनि व्यवसाय चलाउन सक्दैन । खरीद विल र विक्रीविल मिलाउन नसकने, कारोवार नदेखाउने र करछलिका अण्डरलिलिङका समस्या केहि लामो समय रहलान् । दर्ता नगरेरै व्यवसाय गर्न भने अब सकिन्न ।
चाडपर्वको मौसमी अनुगमन भनेर सदाबहार टिप्पनी चलिरहेको सुनिन्छ । यहाँ अनुगमन गरी हुन्छ र ? फलानो ठाँउको हेर्नुछैन भन्ने फटाहहरु पनिछन् । एउटाका मात्रै फालेर हुन्छ यस्ता त कति छन् कति ? सबै फाल्नुपयो नि ? उपमेयर हिडेर हुन्छ कर्मचारी खटाउनु पयो । यो त सम्भबै छैन । यस्ता कुरा सुनिन्छन् । एकैचोटि सबै समाधान हुँदैन । कम्तीमा दर्ता नभएको पसल उद्घाटन गर्न संघका मान्छेहरु जान छोड्नुपर्छ । कर नतिर्ने पसल व्यवसायीको उपमहानगरपालिकाले फोहर उठाउनु हुन्न । वडा कार्यालय देखि सरकारका कुनैपनि काममा दर्ता नभएका पसल व्यवसायबाट कारोवार गरीनु हुन्न । अनुगमन नगरले गरेपनि र्दा प्रकृयामा ल्याउने दायित्व वडा कार्यालयले सम्झिनुपर्छ । टोलविकास संस्थाहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
पुर्ण रुपमा नियम संवत चलेको कोहि छैनन् । सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु सबै भन्दा बढि उल्लंघन गर्छन् । सेतो प्लेट वाला गाडि चलाउनेहरुले लाईसेन्स व्लुवुकको वास्ता गर्दैनन् । अहिले बल्ल तल्ल ठुला ठेकेदारलाई मुद्ध लगाउने कदम शुरु भएको छ । संसद पद निलम्बन गरेर पप्पु ठेकेदारलाई कार्वाहि गरीयो । क्रमसः सुधार हुदैछ । सिष्टममा ल्याउने प्रयत्न गरीदैछ । हामिले आफ्नो स्थानिय सरकारमा कर तिरीरहेका छौ । हाम्रा मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षहरु त्यहि रकम दुरुपयोग गरेका छन् भने खोजौँ । वडा सदस्यले पनि तलव खाएका छन् ।
तिनले काम गरेका छैनन् भनेर लतारेर काममा लगाउँ । सबै जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ त्यसवापत हामीले तिरेको कर बाट तलव खान्छन् । उनिहरुलाई घिसारेर काममा लगाउने हैसियत बनाउन आफु नियम संवत चल्नुपर्छ । स्थानिय सरकारले फोहर उठाएन, अन्य सुविधा दिएन भनेर गालि गर्नेहो भने आफु नियम कानुन अनुसार चलेको हुनुपर्छ । त्यो भनेको दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नु । नियम सम्वत तरीकाले नविकरण गर्नुपनि हो । हाम्रो करले बाँचने हामिलाई सताउने भनेर प्रश्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैले अनुगमन पर्खिने होईन । सरकारलाई झक्झक्याउन तयार भएर बस्ने हो ।
Prevदुर्घटनामा तीनको मृत्यु
Nextट्रकको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु
प्रश्नपत्र आउट भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायको परीक्षा रोकियो
नेपालगञ्जमा मासिँदै छहारी स् ३ वर्षमा १४ सय बढी रुख ढालियो